Egwuregwu bọọlụ 74 kacha mma na akụkọ ihe mere eme | Nye m oge ntụrụndụ
N'ezie ọ na-amasị gị ịkọrọ ezinụlọ gị, onye gị na ya na-emekọ ihe ma ọ bụ ndị enyi gị ịkọrọ gị ahụmahụ. Na ihe mkpali ka mma maka nzukọ, maka ụbọchị mmiri ozuzo ma ọ bụ oyi, ma ọ bụ maka nnọkọ, karịa inwe egwuregwu bọọlụ kacha mma. Enwere ha maka uto na afọ niile, ụdị ụdị na isiokwu dị iche iche. Na-agwụ ike? Ọ gaghị ekwe omume! Ị ga-enwe ọmarịcha oge na aha ndị a anyị kwadoro ebe a.
Na mgbakwunye, anyị na-ahapụrụ gị nchịkọta egwuregwu bọọdụ ndị anyị na-ebipụta ka i wee họrọ nke dabara nke ọma ihe ị na-achọ:
Egwuregwu bọọdụ kacha mma maka ụmụaka
Egwuregwu bọọlụ kacha mma
Egwuregwu bọọdụ ụzọ mgbapụ kacha mma
1 Ụdị egwuregwu bọọlụ
1.1 Otu onye na-egwu egwu
1.1.1 Solitaire nwere kaadị
1.1.3 Ọ bụghị na-enweghị pusi m
1.1.5 Arkham Noir: igbu ọchụ ndị amoosu
1.2 Njikọ aka
1.2.2 Agwaetiti a machibidoro iwu
1.2.4 Egwu Arkham
1.2.6 Ụlọ nke ara
1.2.9 Ogige nke Mysterium
1.2.10 Akụkọ ifo nke Andor
1.3 Egwuregwu bọọdụ maka ndị okenye
1.4 Maka mmadụ abụọ ma ọ bụ di na nwunye
1.4.1 Mebie Tetris Dual
1.4.4 Koodu nzuzo Duo
1.4.6 7 ebube duel
1.5 Egwuregwu maka ụmụaka
1.6 Egwuregwu bọọdụ maka ezinụlọ
1.7 Egwuregwu kaadị
1.7.1 Akaụntụ Mgba
1.7.2 Egwuregwu nla aghụghọ
1.7.3 Ihe mgbochi mmiri okpukpu abụọ
1.8.1 obe ị sị
1.8.2 Ihe na-eme achịcha
1.8.3 cubes akụkọ
1.8.4 Egwuregwu egwu
1.9.5 Ụzọ akụ
1.9.6 Na-achọ alaeze ukwu
1.9.7 bọọdụ oghere
1.10.3 Egwuregwu checkers
1.10.4 Parcheesi na egwuregwu nke ọgazị
1.10.7 Egwuregwu kpọkọtara
1.11 Ihe omumu
1.11.1 Dragọn Ball oche
1.11.3 Egwuregwu bọọlụ nke ocheeze
1.11.4 Na Simpsons
1.11.5 Ihe Nwụrụ Anwụ Na-eje ije
1.11.6 Ụlọ elu nke Indiana Jones Tower
1.11.8 Party & Ụlọ ọrụ Disney
1.11.11 Ego ahụ
1.11.12 Mara ebube
1.11.14 Nke na-ada
1.11.15 Harry Potter dị obere
1.12 Egwuregwu egwuregwu egwuregwu
1.12.3 Chi ojiji
1.12.5 Omuma egwu
1.12.6 Disney ajọ omume
1.12.7 Ọrụ ugbo
1.12.9 Ncheta 44
1.12.10 Imhotep: Onye wuru Egypt
1.12.11 Obodo Omuma
1.13 Online na n'efu
1.13.1 Webụsaịtị egwuregwu efu
1.13.2 Ngwa maka ngwaọrụ mkpanaka
2.1 Ụlọ egwuregwu mgbapụ
2.2 Egwuregwu na-arụ ọrụ
3 Otu esi ahọrọ egwuregwu bọọlụ kacha mma
Ụdị egwuregwu bọọlụ
Ndị a bụ edemede nwere egwuregwu bọọlụ kacha mma na akụkọ ntolite, kewara site edemede na gburugburu. Na ha enweghị ihe ngọpụ maka enweghị oge ntụrụndụ n'ụba:
Otu onye na-egwu egwu
Ndị a Naanị na ike gwụrụ, ị nweghị ike ịme egwuregwu ole na ole mgbe niile, ma ọ bụ na ha anaghị adị njikere mgbe niile igwu egwu, yabụ ọ kacha mma ijide otu n'ime egwuregwu ndị a:
Solitaire nwere kaadị
Fournier - oche ...
Ogbe kaadị, Kaadị egwuregwu, ...
Ụgbọ ala ọ bụghị naanị na-enye gị ohere igwu egwu n'otu ìgwè, ị nwekwara ike ịmepụta owu na-ama gi Na ụdị Windows dị ọcha, mana na tebụl gị, yana oche nke nhọrọ gị, French ma ọ bụ Spanish. Egwuregwu ga-adọpụ uche gị wee jupụta n'ime awa arụghị ọrụ.
Zụta oche nke kaadị Spanish Zụrụ oche kaadị French
Friday chọrọ naanị otu onye ọkpụkpọ, ọ bụkwa egwuregwu kaadị. A solo njem ebe naanị ị nwere ike imeri egwuregwu. Egwuregwu a na-emikpu gị n'akụkọ banyere Robinson, onye ụgbọ mmiri kpuru n'agwaetiti gị ma ga-enyere gị aka ịlụ ọgụ megide ọtụtụ ihe egwu na ndị ohi.
Ọ bụghị na-enweghị pusi m
Emebere egwuregwu ọzọ a maka otu onye ọkpụkpọ, ọ bụ ezie na ha nwere ike igwu egwu ruo 4. Ọ dị mfe, a na-eji kaadị egwuri egwu. Ebumnobi ya bụ iduzi nwamba ka o wee ruo ebe dị mma na-ekpo ọkụ iji pụọ n'okporo ámá. Agbanyeghị, ịgafe oke obodo mepere emepe agaghị adị mfe ...
Zụta Ọ bụghị na-enweghị pusi m
Lúdilo- Egwuregwu Bandit nke ...
Ọ bụ egwuregwu kaadị dị mfe, ọbụlagodi maka ụmụaka. Ha nwere ike igwu egwu site na onye ọkpụkpọ 1 naanị ruo 4. Ma ị ga-ahụrịrị na onye ohi na-achọ ịgbapụ anaghị agbapụ na ya. Akwụkwọ ozi ga na-egbochi ụzọ ijide ya. Egwuregwu ahụ ga-akwụsị mgbe emechiri ụzọ ọpụpụ niile.
Arkham Noir: igbu ọchụ ndị amoosu
Egwuregwu sitere n'ike mmụọ nsọ akụkọ egwu dị egwu nke HP Lovecraft. Ọ bụ aha pụrụ iche maka ndị okenye nke a na-akpọ ya naanị ya. Banyere akụkọ ihe mere eme ya, ọ tụgharịrị na ahụrụla ọtụtụ ụmụ akwụkwọ si Mahadum Miskatonic nwụrụ anwụ. Ụmụ akwụkwọ a nọ na-enyocha isiokwu ndị metụtara mgbaasị ma ị ga-eji egwuregwu kaadị a nweta mgbọrọgwụ nke eziokwu ahụ.
zụta Arkham Noir
Ọ bụrụ na ihe ị chọrọ bụ na-akwalite mmụọ nke otu, E wezụga ịzụlite nkà imekọ ihe ọnụ, kedu ihe dị mma karịa egwuregwu bọọdụ nkwado ndị a:
Egwuregwu imekọ ihe ọnụ dabara adaba maka afọ niile, site na afọ 8. N'ime ya ị ga-edozi ihe omimi, ndị egwuregwu niile ga-emeri ma ọ bụ tụfuo ọnụ. Ebumnobi ya bụ ịchọpụta eziokwu gbasara ọnwụ mmụọ nke na-awagharị n'ụlọ a na-akpagbu. Naanị mgbe ahụ ka mkpụrụ obi gị ga-ezu ike n'udo.
Agwaetiti a machibidoro iwu
Onye ọ bụla ga-arụkọ ọrụ ọnụ iji weghachi ụfọdụ ihe bara uru n'agwaetiti dị omimi. Ma ọ gaghị adị mfe, ebe ọ bụ na àgwàetiti ahụ na-emikpu nke nta nke nta. Were akpụkpọ ụkwụ nke 4 ndị njem na-atụ egwu egwu ma na-anakọta akụ dị nsọ tupu ya agwụchaa n'okpuru mmiri.
Mercury - Egwuregwu nke ...
Egwuregwu nkwado dị mma maka otu dị mma maka ezinụlọ dum. Ha nwere ike igwu egwu site na ndị egwuregwu 2 ruo 12. O nwere kaadị 176 ga-enyere gị aka inweta pasentị ọla edo kacha elu na ogbunigwe ahụ. Otu n'ime ndị egwuregwu bụ saboteur, ma ndị ọzọ amaghị onye ọ bụ. Ebumnuche bụ iji nweta ọla edo n'ihu ya iji merie.
Ọ dabere na otu akụkọ Arkham Noir, yana otu ntọala. Mana nke a bụ mbipụta nke atọ nke nwere ọdịnaya ọhụrụ, ihe omimi ọhụrụ, ara na mbibi karịa, yana ihe ọjọọ ndị ọzọ ga-anwa ịkpọte ihe ọjọọ ụra. Onye ọkpụkpọ ahụ ga-abụ onye nyocha nke ga-anwa izere ọdachi a na-adakwasị ụwa site n'enyemaka nke ndị egwuregwu ndị ọzọ na ihe ngosi ndị e nyere.
Egwuregwu HABA 302387 ...
Ọ bụ egwuregwu imekọ ihe ọnụ emebere maka ụmụntakịrị, site na afọ anọ, ọ bụ ezie na ndị okenye nwekwara ike isonye. Ebumnuche ndị otu Haba Hamster bụ inye aka chịkọta ihe oriri niile dị mkpa maka oge oyi. Ihe niile dị na bọọdụ nwere nkọwa dị iche iche, njirimara pụrụ iche (ụkwụ, ụgbọ ala, igwe mbuli elu ...), wdg.
Ụlọ nke ara
Ụlọ ndị dị na ...
Aha mmekorita ọzọ na-etinye gị n'ime ụlọ ahịhịa na nnukwu ụlọ nke Arkham. Enwere ihe nzuzo na nnukwu anụ mmiri dị egwu zoro ezo. Ụfọdụ ndị ara na ndị òtù nzuzo na-akpa nkata n'ime ụlọ ndị a ịkpọ ndị ochie. Ndị egwuregwu ga-emerịrị ihe mgbochi niile wee kpughee ihe omimi ahụ. Ga-enwe ike?
Zụrụ Ụlọ Mmanya nke Ara
Aha kwesịrị ekwesị maka oge ahụ. Egwuregwu bọọlụ na-atọ ụtọ nke ndị otu pụrụ iche na-egbochi ọrịa ga-echerịrị ọrịa 4 na-egbu egbu na-agbasa n'ụwa niile. Gbalịa nweta ihe niile dị mkpa iji mejupụta ọgwụgwọ ahụ wee chekwaa mmadụ. Naanị ọnụ nwere ike ...
The zombie apocalypse abatala. Ya mere, ị ga-arụ ọrụ dịka otu iji kee onwe gị ma bibie ndị niile na-anwụghị anwụ. Onye ọkpụkpọ ọ bụla na-arụ ọrụ nke onye lanarịrịnụ nwere ikike pụrụ iche, yabụ onye ọ bụla ga-enwe ọrụ ya. Otu a ka ị ga-esi lụso horde bu ọrịa ọgụ. Na mgbakwunye, ọ nwere ụdị Kidz maka ụmụntakịrị.
Zụrụ Zombicide Zụrụ ụdị Kidz
Ogige nke Mysterium
Ogige Mysterium bụ egwuregwu bọọlụ kacha mma na-arụkọ ọrụ ọnụ ebe ị na-emikpu onwe gị na ngosi ngosi, mana nke na-ezochi nzuzo nzuzo. Onye bụbu onye nduzi ya furu efu, nyocha ahụ erubeghịkwa nkwubi okwu. Ebe ọ bụ na ụbọchị ahụ, iju ihe akwụsịbeghị na-eme na ụfọdụ kwenyesiri ike na mmụọ ha na-awagharị n'ebe ahụ ... gị ihe mgbaru ọsọ bụ inyocha na-achọpụta eziokwu na ị nwere naanị 6 ehihie na abalị tupu ngosi ahapụ obodo.
Zụrụ ogige Mysterium
Akụkọ ifo nke Andor
Devir - Akụkọ mgbe ochie nke ...
Onye meriri nturu ugo, nke a bụ aha ọzọ kacha mma ị nwere ike zụta. Egwuregwu nke onye na-ese ihe ama ama Michael Menzel mepụtara na nke ga-akpọrọ gị gaa n'alaeze Andor. Ndị iro nke mpaghara a na-aga n'ihu nnukwu ụlọ nke King Brandur. Ndị na-egwu egwuregwu na-abanye n'ime akpụkpọ ụkwụ nke ndị dike ga-eche ya ihu iji chebe nnukwu ụlọ ahụ. Na… kpachara anya maka dragọn ahụ.
Zụrụ akụkọ ifo nke Andor
Egwuregwu bọọdụ maka ndị okenye
Maka ndị nọ n'afọ iri na ụma, maka nnọkọ ndị enyi, iji nọrọ na ya oge kacha ịtụnanya na ndị ị na-eche. Nke ahụ bụ ihe nhọrọ nke aha egwuregwu ndị okenye kacha mma bụ maka.
Hụ egwuregwu bọọdụ kacha mma maka ndị okenye
Maka mmadụ abụọ ma ọ bụ di na nwunye
Mgbe ọnụ ọgụgụ ndị na-egwu egwuregwu belata ka ọ bụrụ naanị abụọ, enwere ike ọnweghị oke. adị egwuregwu pụrụ iche maka ụzọ abụọ nke ndị egwuregwu. Ụfọdụ n'ime ndị kacha mma bụ:
Mebie Tetris Dual
Nsogbu - Tetris Dual, ...
Ọ bụ egwuregwu bọọlụ chọrọ mmeghe ole na ole. Ị nwere osisi kwụ ọtọ nke nwere oghere dị n'akụkụ elu nke ị ga-esi na-atụba iberibe ahụ. Ibe ọ bụla nwere ụdị egwuregwu vidiyo retro a ma ama, ma ị ga-adaba n'ụzọ kacha mma ntụgharị ọ bụla.
Ọ bụ otu n'ime egwuregwu bọọdụ kacha mma na-ere n'ụwa. Emebere ya na 1987, ọ dịgidere ruo taa, emezigharịrị ya kpamkpam. Ị nwere bọọdụ hexagon na ụfọdụ marble. Ebumnobi bụ ịtụfu bọọdụ 6 marble nke onye mmegide (nke 14 nke o debere).
Ọ bụrụ na-amasị gị ọdịda anyanwụ, mgbe ahụ, ị ​​ga-ahụ n'anya egwuregwu kaadị a na-ewega gị n'ebe dị anya na ọhịa West nke ị ga-eche ihu onye iro gị na a duel. Ndị omeiwu megide ndị nnọchianya nke iwu, naanị otu nwere ike ịnọ, nke ọzọ ga-ata uzuzu ...
Koodu nzuzo Duo
Ọ bụ egwuregwu nke mgbagwoju anya na ihe omimi emebere maka ezinụlọ dum, na-egwu egwu na abụọ. Ị ga-adị ngwa na amamihe, dị ka ị ga-abụ onye nledo nke ga-edozi ihe omimi site n'ịkọwa aghụghọ clues. Ụfọdụ nwere ike ịbụ herring na-acha uhie uhie, ma ọ bụrụ na ị nweghị ike ịkọrọ ha, ihe ga-esi na ya pụta ga-adị njọ ...
Egwuregwu SD- Nkwupụta, Agba ...
Eze anwụọla, ma o nweghị onye ma otú o si mee. Ọ pụtara gbadoro ụkwụ n'ime nnukwu mmanya mmanya. Ọ hapụghị ndị nketa amara. Nke ahụ bụ ihe atụ nke egwuregwu na-amalite, nke nwere akụkụ abụọ: nke mbụ onye ọ bụla na-egwu egwu ga-eji kaadị ha na-ewe ndị na-eso ụzọ, na nke abụọ ndị na-eso ụzọ ga-alụ ọgụ iji nweta ọtụtụ. Onye ọ bụla nwetara votu kacha n'òtù ha na-emeri.
7 ebube duel
Asmodee-7 Ihe ịtụnanya: ...
Yiri n'ụdị ihe ịtụnanya 7 enwetara ihe nrite, mana emebere ya maka ndị egwuregwu abụọ. Mee nke ọma ma merie asọmpi gị iji mee ka mmepeanya gị dịgide. Onye ọkpụkpọ ọ bụla na-eduga mmepeanya, na-ewu ụlọ (kaadị ọ bụla na-anọchite anya ụlọ) ma nyere aka wusie ndị agha ike, chọpụta ọganihu teknụzụ, kwalite alaeze gị, wdg. Ị nwere ike imeri site na ndị agha, sayensị na ọchịchị obodo.
Zụrụ 7 Wonder Duel
Egwuregwu maka ụmụaka
Y’oburu umuntakiri n'ulo, Otu n'ime onyinye kacha mma ị nwere ike inye ha bụ otu n'ime egwuregwu ndị a. Ụzọ ha ga-esi zụlite nke ọma, mụta ihe, wee pụọ na ihuenyo nwa oge ole na ole ...
Hụ egwuregwu bọọlụ kacha mma maka ụmụaka
Egwuregwu bọọdụ maka ezinụlọ
Ndị a bụ otu n'ime ihe kacha mma ị nwere ike ịzụta, ebe ọ bụ na onye ọ bụla nwere ike isonye, enyi, ụmụ gị, ụmụ ụmụ, nne na nna ochie, nne na nna ... Pụrụ iche e mere maka nnukwu na nnọọ fun otu.
Hụ egwuregwu ezinụlọ kacha mma
Maka Fans nke juegos de cartasNke a bụ ụfọdụ ndị ọzọ na-etinyebeghị na ngalaba ndị gara aga, ndị dabere na oche:
Kaadị egwu egwu naanị...
Ọ bụ egwuregwu Monopoly ama ama, mana ejiri kaadị egwuri egwu. Egwuregwu ngwa ngwa na nke na-atọ ụtọ nke na-eji kaadị eme ihe na-anakọta ụlọ, na-azụ ahịa, nweta ihe onwunwe, wdg.
Zụrụ Monopoly deal
Egwuregwu nla aghụghọ
Devir - Egwuregwu nla ...
Egwuregwu kaadị nke mejupụtara nkesa ndị egwuregwu na onye mbụ gbapụrụ n'ime ha na-emeri. Iji mee nke a, ha ga-abụrịrị na-atụnye kaadị n'otu oge nwere ọnụọgụ dị elu ozugbo ma ọ bụ dị ala karịa nke dị na tebụl. Na nke kacha mma, iji merie, ị ga-aghọ aghụghọ.
Zụrụ nla nla
Ihe mgbochi mmiri okpukpu abụọ
Egwuregwu nke ọsọ, nleba anya na ntụgharị uche, nwere ọtụtụ kaadị enweghị mmiri ka ị nwekwara ike igwu egwu n'ọdọ mmiri n'oge okpomọkụ. Kaadị ọ bụla pụrụ iche, ma nwee naanị otu foto jikọrọ ya na nke ọ bụla ọzọ. Chọọ akara ngosi ndị ahụ, kwuo ya n'olu dara ụda wee buru ma ọ bụ dobe kaadị ahụ. Ị nwere ike igwu ihe ruru 5 minigames dị iche iche.
Ọ bụrụ na egwuregwu bọọlụ ma ọ bụ kaadị bụ ihe ama ama, otu ahụ ka egwuregwu dice dịkwa. Nke a bụ ụfọdụ n'ime dais egwuregwu kacha mma:
obe ị sị
Ị nwere dice 14, 1 iko, 1 hourglass, ma nke ahụ bụ ya. Egwuregwu gbanyere mkpọrọgwụ iji kwalite nghọta ige ntị, ndidi, nka nka. Naanị ị ga-atụgharị dice ahụ wee mepụta ọnụ ọgụgụ okwu jikọtara ọnụ n'ime oge ị nwere. Dee isi ihe gị wee merie ndị na-emegide gị.
Zụrụ Cross Dices
Ihe na-eme achịcha
Otu iko na dice bụ naanị ihe ị ga-achọ maka ịsọ mpi na igwu egwu. Ọ bụ egwuregwu dị mfe, nke enwere ike ịkpọ otu ọ bụla masịrị gị, mana nke ị nwere ike iji tụgharịa dice ahụ wee hụ onye na-atụgharị ọnụ ọgụgụ kacha ukwuu, ma ọ bụ nwaa ijikọ nchikota nke ga-apụta.
Ọ bụghị egwuregwu dice ọdịnala, mana ị nwere dice 9 nwere ihu nwere ike ịbụ agwa, ebe, ihe, mmetụta, wdg. Echiche bụ ịtụgharị dice ahụ, dabere n'ihe ị nwetara, jiri ihe ndị ahụ kọọ akụkọ.
Zụrụ Cubes Akụkọ
Ravensburger - gbuo ...
Egwuregwu maka ezinụlọ dum ma ọ bụ maka ndị enyi. Duel dị egwu site n'ịtụgharị dice n'ọgbọ egwuregwu iji chọta ngwakọta akara dakọtara nke a ga-eji asụ afa na afa. Ka egwuregwu na-aga n'ihu, onye ọkpụkpọ ahụ ga-atụfu dice ma mebie ike ha. Onye buru ụzọ tufuo dace bụ onye efu.
Ọ dị mfe ịmụta, na-azụlite nkà nke uche gị, na egwuregwu na-adị ngwa ngwa, ebe ọ bụ na ọ dịghị mkpa na ntụgharị, onye ọ bụla na-ekere òkè. Iji nweta akara, ị ga-etinye akara ọnụọgụgụ dị ka o kwere mee.
Otu egwuregwu bọọlụ ndị ọzọ dị mkpa bụ egwuregwu bọọlụ. Bọọdụ ndị ahụ abụghị naanị ihe ndabere nke egwuregwu ahụ, mana ha nwere ike ịnye gị ọnọdụ egwuregwu na-emikpu karịa. Ụfọdụ bọọdụ dị larịị, ma ndị ọzọ nwere akụkụ atọ ma eme ya nke ọma.
Scrabble bụ otu n'ime egwuregwu kacha mara mma na nke na-atọ ụtọ ịme okwu. Ị ga-asụpe ma jikọta mkpụrụedemede iji mepụta mkpụrụokwu na kaadị 7 ewepụtara na enweghị usoro. Akwụkwọ ozi ọ bụla nwere uru, ya mere a na-agbakọ akara dabere na ụkpụrụ ndị ahụ.
Atụmatụ B Egwuregwu PBG40020 ...
Egwuregwu bọọlụ a ga-eme ka ị wepụta mkpụrụ obi omenkà gị, na-eke taịlị mosaic mara mma na taịlị ya. Ebumnuche bụ inweta ihe ịchọ mma kacha mma maka alaeze Evora. Enwere ike ịkpọ ya site na ndị egwuregwu 2 ruo 4, ma dabara na afọ 8.
Zụrụ acha anụnụ anụnụ
Tactic Touché Ụmụaka na ...
Egwuregwu bọọdụ ụzọ maka ezinụlọ dum. Nkọwagharị nke egwuregwu kaadị deck Spanish mere bọọdụ. Ị na-anwa anwa inye ya ntụgharị?
Egwuregwu Cefa- Egwuregwu Dracula
Omuma sitere na 80s nke na-emeghachi azụ. Egwuregwu sitere n'ike mmụọ nsọ nke ọhịa Transylvania, na mpaghara Dracula's castle. Ndị agha nke ihe ọjọọ na ike nke ọma na-alụ ọgụ ka ha bụ ndị mbụ na-abanye na nnukwu ụlọ. Onye ga-enweta ya?
Egwuregwu ụmụaka Cefa- Egwuregwu bọọdụ, ...
Ndị kacha enwe mmasị n'ezie ga-echeta egwuregwu a ka na-ere. Egwuregwu na-atọ ụtọ maka ezinụlọ dum ebumnuche ha bụ ịzụrụ na ire ihe onwunwe n'akụkụ oke osimiri Mediterenian na narị afọ nke XNUMX na XNUMX. Jikwaa akụ gị nke ọma ka ị na-abanye n'ime njem ndị pirate a.
Zụrụ Ụzọ Akụ Akụ
Na-achọ alaeze ukwu
Egwuregwu ụmụaka Cefa- Egwuregwu Disney ...
Egwuregwu egwu egwu maka ezinụlọ dum n'etiti ihe dị egwu na nke anwansi. Aha ọzọ a na-akpọbu na 80s na ọtụtụ ụmụaka n'oge ahụ ga-enwe ike ịkụziri ụmụ ha ihe.
Zụrụ Na-achọ Alaeze Ukwu Cobra
Mepụta egwuregwu nke gị ...
Chips, dice, hourglass, kaadị, kaadị, roulette wheel, na a osisi… Ma niile oghere! Echiche bụ na ị chepụtara egwuregwu bọọlụ nke gị. Site na iwu ịchọrọ, otu ịchọrọ, ịbịaru na akwa akwa ọcha, iji akwụkwọ mmado e biri ebi, wdg.
Zụrụ egwuregwu gị
Ha enweghị ike ịhapụ uche ha egwuregwu bọọlụ kpochapụwo, ndị nọworo n'etiti anyị ruo ọtụtụ ọgbọ na-adịghị aga nke ọma. Ndị kacha mma bụ:
StonKraft Set nke ...
Osisi osisi na-atụ 31 × 31 cm, nke ejiri aka kpụrụ ya. Ọrụ nka nke nwere ike ije ozi dị ka ihe eji achọ mma na igwu egwuregwu kacha mma na onye ọ bụla ịchọrọ. Iberibe ndị ahụ nwere ala ndọta ka ha ghara ịdapụ n'elu osisi ngwa ngwa. Na osisi nwere ike apịaji ma gbanwee ka ọ bụrụ igbe iji jide taịl nile.
Dominoes chọrọ mmeghe ole na ole. Ọ bụ otu n'ime egwuregwu kacha ochie n'akụkọ ihe mere eme. Na ebe a, ị nwere otu egwuregwu kachasị mma, nke nwere obere akpa na iberibe ejiri aka mee. Na mgbakwunye, ọ bụghị naanị otu ụzọ igwu egwu, mana enwere ọtụtụ ụdị ...
30 × 30 cm siri ike osisi birch osisi na 40 iberibe osisi 30 mm dayameta. Zuru oke ịme egwuregwu kpochapụwo nke checkers. Egwuregwu dị mfe kwesịrị ekwesị maka ndị mmadụ karịrị afọ 6.
Zụrụ ụmụ nwanyị
Parcheesi na egwuregwu nke ọgazị
Otu osisi, ihu abụọ, egwuregwu abụọ. N'ime akụkọ a, ị ga-enwe ihe niile ịchọrọ ịme egwuregwu kpochapụwo nke Parcheesi, yana egwuregwu ọgazị ma ọ bụrụ na ị tụgharịa ya. Gụnyere bọọdụ osisi 26.8 × 26.8 cm, iko 4, dice 4 na akara iri na isii.
Bingo bụ egwuregwu maka ezinụlọ dum, otu n'ime oge ochie. Na akpaka drum ka ị ga-ahapụ bọọlụ ndị nwere ọnụọgụ ọnụọgụ ka ị gafe na kaadị ahụ ruo mgbe ị kwụ n'ahịrị ma ọ bụ bingo. Na iji kwalite asọmpi, ị nwere ike ịmegharị ihe ...
Egwuregwu - Jenga (Hasbro ...
Jenga bụ egwuregwu ochie sitere na narị afọ gara aga, site na kọntinent Africa. Ọ dị nnọọ mfe, na onye ọ bụla nwere ike igwu egwu. Naanị ị ga-ewepụ ihe mgbochi osisi n'ụlọ elu ahụ na-adaghị. Echiche bụ ịhapụ ụlọ elu ahụ ka ọ bụrụ nke na-adịghị mma dị ka o kwere mee ka ọ bụrụ na ọ bụ onye mmegide, ọ ga-ada. Onye tufuru iberibe ahu tufuru.
Naanị otu egwuregwu na-agwụ ike? Ị na-eme njem nke ukwuu ma enweghị ike ịme egwuregwu niile ị nwere? Nhọrọ kacha mma bụ ịzụta mkpọ egwuregwu 400 a nwere agbakọ. Gụnyere akwụkwọ nwere ntuziaka maka onye ọ bụla. N'ime narị narị egwuregwu ndị ahụ bụ ụfọdụ dị ka chess, egwuregwu kaadị, dice, dominoes, checkers, Parcheesi, wdg.
Zụrụ Egwuregwu agbakọtara
Ọ bụrụ na ị bụ onye ofufe nke Ihe nkiri TV, egwuregwu vidiyo ma ọ bụ ihe nkiri Ihe nkiri kacha aga nke ọma, enwere egwuregwu gbasara ha nke ị ga-enwe mmasị na ya:
Dragọn Ball oche
Ndị na-egwu egwuregwu bọọlụ Dragon ga-enwe mmasị na egwuregwu kaadị a na-egosipụta agwa sitere na usoro DBZ a ma ama. Naanị tụba kaadị gị n'aka gị wee gbalịa imeri nke onye mmegide, dịka ike nke onye ọ bụla si dị ...
Zụrụ ọdụ ụgbọ mmiri DBZ
Egwuregwu ụgbọ elu Fantasy Doom...
Doom bụ otu n'ime egwuregwu vidiyo ama ama na akụkọ ntolite. Ugbu a, ọ na-abịa na osisi a osisi egwuregwu nke onye ọ bụla player ga-abụ onye ji ngwá agha na-agbalị ịlụ ọgụ megide kasị infernal nnukwu anụ ị pụrụ iche n'echiche.
Egwuregwu bọọlụ nke ocheeze
Egwuregwu nke ocheeze - The ...
Ọ bụrụ na usoro HBO a ma ama masịrị gị, mgbe ahụ ị ga-ahụkwa egwuregwu bọọlụ a nke nwere isiokwu Game of Thrones. Onye ọkpụkpọ ọ bụla na-achịkwa otu n'ime nnukwu ụlọ, ma ga-eji aghụghọ na ikike ha nweta njikwa ụlọ ndị ọzọ. Na ihe niile nwere akara ngosi nke usoro.
Zụrụ Egwuregwu nke ocheeze
Hasbro Egwuregwu Ndụ -...
Obodo na ihe odide sitere na usoro ihe nkiri a ma ama na-adị ndụ ebe a, na bọọdụ na-atọ ụtọ ebe ị ga-emikpu onwe gị na ndụ nke odo odo ndị a mara mma.
Zụrụ ndị Simpsons
Ihe Nwụrụ Anwụ Na-eje ije
Nchụso Trivial The ...
A nkịtị na nkịtị Trivial ịchụso, na ya cheeses, ya taịl nile, ya osisi, ya kaadị na ajụjụ ... Ma na a dị iche, na nke ahụ bụ na ọ bụ n'ike mmụọ nsọ nke ama usoro nke zombies.
Zụrụ Trivial TWD
Ụlọ elu nke Indiana Jones Tower
Hasbro Ụlọ elu nke ...
Adventure na aha nka, edobere na ihe nkiri Indiana Jones, yana Temple of Akator dị ka ntọala. Ụzọ isi na-echeta ihe nkiri a bụ otu n'ime ego kachasị ego n'oge ya.
Zụrụ La Torre
Noris - Egwuregwu bụ German ...
Egwuregwu egwuregwu, Jumanji dịkwa. Ihe nkiri a ma ama banyere egwuregwu bọọlụ ugbu a na-abịakwa n'ụdị ụlọ mgbapụ maka ezinụlọ dum. Chọpụta ihe omimi wee gbanarị oke ọhịa a ndụ, ma ọ bụrụ na ị nwere ike ...
Party & Ụlọ ọrụ Disney
Nke kariri otu, otu Party & Co., nke nwere otutu ule nmimi, ajụjụ na azịza, eserese, ilu, wdg. Mana ha niile nwere isiokwu nke agwa akụkọ ifo Disney kacha ewu ewu.
Zụrụ Party Disney
Nsogbu - Masterchef, Egwuregwu ...
Mmemme nri TVE nwekwara egwuregwu. Soro ezinụlọ dum gwuo bọọdụ a edobere na Masterchef yana ajụjụ dabere na mmemme iji nweta ebumnuche.
Ọ bụrụ na-amasị gị Jurassic Park saga na ị bụ onye na-akwado dinosaur, ị ga-ahụ egwuregwu bọọlụ gọọmentị a sitere na ihe nkiri Jurassic World n'anya. Onye ọkpụkpọ ọ bụla ga-arụrịrị ọrụ, gwupụta ma chọpụta fossils, rụọ ọrụ na ụlọ nyocha na DNA dinosaur, wuo ụlọ maka dinosaurs na jikwaa ogige ahụ.
Zụrụ ụwa Jurassic
Usoro Spanish La casa de papel ekpochapụla Netflix ma debe onwe ya dị ka otu n'ime ihe ndị a na-elele na mba dị iche iche gburugburu ụwa. Ọ bụrụ na ị bụ otu n'ime ndị na-eso ụzọ ya, egwuregwu bọọlụ a enweghị ike ịpụ na akwụkwọ akụkọ gị. Otu osisi nwere taịlị ebe ị nwere ike igwu egwu dịka ezinụlọ nwere ndị ohi na ndị eji eji.
Space Cowboys Ndị ọzọ ...
Eluigwe na Ala Marvel na ndị Avengers abanyela na egwuregwu bọọlụ. N'ime egwuregwu a, ị ga-achịkọta otu ndị dike ma gbalịa igbochi Thanos ibibi ụwa. Iji mee nke a, a ghaghị ịchọta Infinity Gems nke gbasasịrị na mbara igwe dị iche iche.
Zụta ịma mma
Ọ ka bụ Cluedo kpochapụrụ, nwere otu ike na ụzọ egwu. Mana site na isiokwu nke usoro ihe nkiri a ma ama The Big Bang Theory.
Zụrụ The Big Bang Theory
Nke na-ada. Aba...
Usoro ihe onyonyo Spanish La que se avecina ugbu a nwekwara egwuregwu gọọmentị. Gwuo egwu na ụlọ Montepinar a ma ama yana agwa ya. Ọ dabara na afọ 8, ma nwee ike igwu egwu ruo mmadụ 12. N'egwuregwu ahụ, a na-atụ aro ihe maka obodo, onye ọkpụkpọ ọ bụla na-ekpebi ịtụ vootu ma ọ bụ ịghara.
Harry Potter dị obere
Nchụso obere ihe - Harry ...
Ihe nkiri Harry Potter ewepụtala ihe nkiri, usoro, egwuregwu vidiyo na egwuregwu bọọlụ. Ọ bụrụ na-amasị gị akwụkwọ ya, ugbu a ị nwekwara ike inwe ọtụtụ puku ajụjụ gbasara ihe odide ya na akụkọ anwansi kachasị ewu ewu nke narị afọ nke XNUMX na Trivia a.
Zụrụ obere HP
Iri na otu FORCE Trivial zuru ...
The Hobbit na The Lord of the Rings so na akwụkwọ kacha aga nke ọma nke ebugara na sinima. Ugbu a, ha akpaliwokwa vieogames na, n'ezie, egwuregwu bọọlụ dị ka Trivial a. A na-eyizi egwuregwu ịgba chaa chaa a ma ama n'isiokwu a na-anụ ọkụ n'obi mgbe ochie.
Zụrụ Trivia Lord of the Rings
Ike na akụkụ gbara ọchịchịrị na-abịa na tebụl gị ugbu a na egwuregwu a dabere na akụkọ ifo sayensị ama ama. Egwuregwu maka ndị egwuregwu 2, site na 14 afọ, na ebe ị nwere ike ịhụ agha ndị a ma ama n'etiti Jedi na Sith. Jiri obere ihe a kpụrụ akpụ mara mma na-egosipụta agwa akụkọ ifo duo ndị agha gị.
Zụrụ Star Wars Legion
Site n'akwụkwọ ha gara egwuregwu vidio na ihe nkiri. Dune ejirila ụdị ọhụrụ laghachi na ụlọ ihe nkiri n'oge na-adịbeghị anya. Ọfọn, ị nwekwara ike igwu egwuregwu bọọdụ dị egwu a. Na nnukwu akụkụ chere ibe ya ihu, na ama ama ọzara na mbara ala, na ihe niile ị na-atụ anya si Dune.
niile ndị nwere mkpụrụ obi strategist ma hụ egwuregwu agha n'anya, Capture the Flag (CTF), na ihe ndị yiri ya, ha ga-enwe mmasị dị ka ụmụaka nwere egwuregwu atụmatụ ndị a:
ERA na-akpọga gị na Spain ochie, egwuregwu atụmatụ nwere obere 130, dice 36, bọọdụ egwuregwu 4, pegs 25, akara 5 na blọgụ 1 maka akara. Ụzọ isi mee ka akụkọ ihe mere eme Spanish jiri nnukwu aha a dịghachi ndụ.
Ọ bụ egwuregwu atụmatụ kacha mma, otu n'ime ndị kacha ere na onyinye, yana ndị egwuregwu nde 2 n'ụwa niile. Ọ dabeere n'àgwàetiti Catan, ebe ndị ọbịa bịarutere ịmepụta obodo mbụ. Onye ọ bụla na-egwu egwu ga-enwe nke ya, ma ga-emepe obodo ndị a iji gbanwee ha ka ha bụrụ obodo. Maka nke ahụ, ịchọrọ akụrụngwa, guzobe njikọ azụmahịa, wee chebe onwe gị.
Nke a bụ otu egwuregwu bọọdụ atụmatụ kacha mma. Ọ dabeere na post-Twilight Wars oge, Great Races nke oge ochie Alaeze Ukwu Lazax gara n'ebe obibi ha ụwa, na ugbu a, e nwere oge nke obi iru ala. Ụyọkọ kpakpando dum ga-akpali ọzọ n'ọgụ iji nwetaghachi ocheeze ahụ. Onye nwetara ikike agha na njikwa nwere ọgụgụ isi ga-abụ onye nwere ihu ọma.
Zụrụ Twilight Imperium
Omuma nke agha na egwuregwu atụmatụ. Otu bọọdụ iji wakpo ma chebe onwe gị na aghụghọ, iji jide ọkọlọtọ ndị iro gị na ndị agha gị nke iberibe 40 nwere ọkwa dị iche iche.
Egwuregwu a so na ụdị nke a kacha ewu ewu. Na ya ị ga-ejirịrị chepụta atụmatụ ị ga-achị ụwa. N'iji ọnụọgụ 300 emelitere, ndị ọrụ nwere kaadị, yana imewe nke ọma. Ndị na-egwu egwuregwu ga-emepụta ndị agha, bugharịa ndị agha gafee maapụ wee lụọ ọgụ. Dabere na nsonaazụ dice ahụ, onye ọkpụkpọ ahụ ga-emeri ma ọ bụ tụfuo.
Disney ajọ omume
Kedu ihe ma ọ bụrụ na ndị ọjọọ Disney niile na-agbakọta na egwuregwu iji chepụta atụmatụ Machiavellian? Họrọ agwa ọkacha mmasị gị wee chọpụta ikike pụrụ iche o nwere. Mepụta atụmatụ kachasị mma na ntụgharị ọ bụla wee gbalịa imeri.
Zụrụ onye ọjọọ
Egwuregwu Lookout 22160028 -...
Site na Uwe Rosenberg, mkpọ a gụnyere bọọdụ egwuregwu nwere akụkụ abụọ 9, okwute okwu 138, stampụ nri nri 36, nkume anụmanụ 54, okwute mmadụ 25, ngere 75, ụlọ 20, ihe ngosi ụlọ 24, ụlọ obodo 33, taịlị ndị ọbịa 3, ọtụtụ ọnụọgụ 9. taịlị, ngọngọ akara 1, nkume mmalite onye ọkpụkpọ 1, kaadị 360, na akwụkwọ ntuziaka. Ọ nweghị nkọwa zuru oke iji nwee ike iwulite ma jikwaa ugbo ala ochie gị ebe ị nwere ike ịzụlite ọrụ ugbo na anụ ụlọ iji lụso agụụ ọgụ ...
N'ezie aha The Great War, ma ọ bụ The Great War, nke Richar Borg na-ada gị maara. Ọ bụ otu mmebe dị ka Memoir 44 na Battlelore. Ọ dabere na agha nke Agha Ụwa Mbụ, na-enye ndị egwuregwu ohere ịbanye n'akụkụ ma maliteghachi agha akụkọ ihe mere eme nke mere na trenches na n'ọgbọ agha. Egwuregwu na-agbanwe agbanwe nke nwere kaadị maka mmegharị na dice na-edozi ọgụ.
Ụbọchị Ijuanya 7301 ...
Site n'otu onye edemede ahụ, nke a bụ otu n'ime egwuregwu atụmatụ agha kachasị mma ị nwere ike ịzụta. Tọọ oge a na Agha Ụwa nke Abụọ, yana mgbasawanye enwere ike na ọnọdụ dị iche iche iji gbasaa ọdịnaya. Ọ bụrụ na-amasị gị atụmatụ agha na akụkọ ihe mere eme, ọ ga-adabara gị dị ka uwe aka. N'agbanyeghị na ọ dịtụ mgbagwoju anya ...
Imhotep: Onye wuru Egypt
Devir - Imhotep, onye ...
Ịgaghachi azụ n'oge na Egypt oge ochie. Imhotep bụ onye mbụ na onye wuru ewu n'oge ahụ. Ugbu a site na egwuregwu bọọlụ a, ị nwere ike ịnwale ijikọ ihe ha rụzuru site n'ịkwalite ihe ncheta na imepụta atụmatụ nke gị iji gbochie ndị mmegide ịga nke ọma.
Lụọ ọgụ ka ị bụrụ onye na-ewu ụlọ nke na-esote nna ukwu. Jiri nkà mmepe obodo gị nwee mmasị na ndị ama ama ma nyere ndị mmụọ dị iche iche aka na egwuregwu atụmatụ a. Ị nwere kaadị agwa 8 na mkpọ ị ga-ahọrọ na, kaadị mpaghara 68, kaadị enyemaka 7, akara okpueze 1, na akara mkpụrụ ego ọla edo iri atọ.
Online na n'efu
Ị nwekwara ọtụtụ egwuregwu bọọdụ ịntanetị, ka kpọọ n'efu naanị ma ọ bụ ndị ọzọ nọ n'ebe dị anya, yana ngwa maka mobile ngwaọrụ nke na-enwe fun na-enweghị na-na mmadụ (ọ bụ ezie na nke a na-ewepụ ụfọdụ amara, na na price nke ìhè ... fọrọ nke nta ka mma ka. nwee egwuregwu anụ ahụ):
Webụsaịtị egwuregwu efu
Ngwa maka ngwaọrụ mkpanaka
Ị nwere ike ịchọ na ụlọ ahịa Google Play na ekwentị mkpanaaka gị ma ọ bụ na Apple App Store, dabere na sistemụ arụmọrụ ị nwere, aha ndị a:
Catan Classic maka iOS na gam akporo.
Carcasson maka gam akporo
Monopoly maka iOS na gam akporo
Scrabble maka iOS na gam akporo
Eserese maka iOS na gam akporo
Chess maka iOS na gam akporo
Egwuregwu Goose maka iOS na gam akporo
Enwekwara ụdị egwuregwu bọọlụ abụọ, n'agbanyeghị na enwere ike itinye ha n'otu n'ime edemede ndị gara aga, na-etolite otu nọọrọ onwe ha n'onwe ha. Na mgbakwunye, ndị a enwetawo a obi ọjọọ ihe ịga nke ọma, ma ha nwere ọtụtụ ndị na-akwado ụdị ndị a:
Ụlọ egwuregwu mgbapụ
Ụlọ mgbapụ aghọwo ihe ejiji ma wakpoo ókèala Spanish niile. Ha abụrụlarị otu n'ime ihe omume ntụrụndụ kachasị amasị n'ọtụtụ mba, ebe ọ na-enye gị ohere ịmekọrịta ndị enyi ma ọ bụ ezinụlọ wee dozie egwuregwu mgbagwoju anya. Na mgbakwunye, ha nwere ụdị isiokwu dị iche iche, iji meju ihe niile ụtọ (akụkọ sayensị, egwu egwu, akụkọ ihe mere eme, ...). Ntọala dị ịtụnanya nke n'ihi Covid-19 nwere oke mgbochi. Iji nweta ihe mgbochi ndị ahụ, ịkwesịrị ileba anya aha ụlọ mgbapụ kacha mma igwu egwu n'ụlọ.
Hụ egwuregwu bọọlụ kacha mma Escape Room
Egwuregwu na-arụ ọrụ
Ọzọ n'ime uka phenomena na-inweta adherents bụ egwu egwu. Ha na-eri ahụ nke ukwuu, ma enwerekwa nnukwu ụdị ha, nwere ọtụtụ isiokwu. Egwuregwu ndị a na-emikpu gị n'ọrụ, àgwà nke ị ga-eme n'oge egwuregwu iji nweta ebumnobi gị.
Hụ egwuregwu bọọdụ kacha mma na-egwu egwuregwu
Otu esi ahọrọ egwuregwu bọọlụ kacha mma
N'oge họrọ egwuregwu bọọlụ kwesịrị ekwesị Ekwesịrị iburu n'uche ụfọdụ igodo. Atụmatụ ndị a ga-enyere gị aka ịzụrụ ihe kwesịrị ekwesị mgbe niile:
Ọnụọgụ ndị egwuregwu: ọ dị mkpa iburu n'uche ọnụọgụ ndị egwuregwu ga-esonye. Enwere naanị maka mmadụ 2, ndị ọzọ maka ọtụtụ mmadụ, yana ọbụlagodi ndị nwere otu ma ọ bụ otu. Ọ bụrụ na ha bụ maka ndị di na nwunye ma ọ bụ abụọ, ọ bụghị otú ahụ ka ọ dị mkpa, ebe ọ bụ na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ha niile nwere ike igwu egwu naanị mmadụ abụọ. N'aka nke ọzọ, ọ bụrụ na ha bụ maka nnọkọ ndị enyi ma ọ bụ egwuregwu bọọlụ ezinụlọ, nke a ga-adị mkpa.
Afọ: ọ dị mkpa iji nyochaa afọ nke akwadoro egwuregwu ahụ. Enwere ọtụtụ egwuregwu maka onye ọ bụla site na ụmụaka ruo ndị agadi, yabụ na ha zuru oke igwu egwu dịka ezinụlọ. Kama, ụfọdụ site na ọdịnaya bụ kpọmkwem maka ụmụaka ma ọ bụ ndị toro eto.
Gbado anya: ụfọdụ egwuregwu na-eme ka ebe nchekwa dịkwuo mma, ndị ọzọ na-akwalite mgbagha, maka nkà mmekọrịta ọha na eze, ịkwalite ọrụ nkwado, ma ọ bụ maka nkà moto, na ọbụna mmụta. Na-enweghị ha bụ maka ndị na-eto eto, nke a dịkwa mkpa, ebe ọ bụ na a ghaghị ịhọrọ nke kachasị mma dịka mkpa nwatakịrị ahụ si dị.
Isiokwu ma ọ bụ otu: Dịka ị hụla, e nwere ụdị egwuregwu bọọlụ dị iche iche. Ọ bụghị onye ọ bụla nwere mmasị na onye ọ bụla, ya mere ọ dị mkpa ka ị mara ka esi amata ụdị egwuregwu nke ụdị ọ bụla iji nwee ihe ịga nke ọma na ịzụrụ.
Mgbagwoju anya na usoro mmụta: ọ dị ezigbo mkpa ma ọ bụrụ na ndị na-eto eto ma ọ bụ ndị agadi ga-egwu egwu, na mgbagwoju anya nke egwuregwu ahụ adịghị elu, nakwa na ọ nwere usoro mmụta dị mfe. N'ụzọ dị otú a, ha ga-enwe ike ịghọta ọnọdụ egwuregwu ahụ ngwa ngwa ma ha agaghị efu ma ọ bụ nwee nkụda mmụọ site n'amaghị otú e si egwu egwu.
Egwuregwu oghere- Ọtụtụ egwuregwu bọọlụ na-enye gị ohere igwu egwu na tebụl ma ọ bụ elu ọ bụla. N'aka nke ọzọ, ndị ọzọ chọrọ ntakịrị ohere n'ime ụlọ ma ọ bụ ụlọ egwuregwu. Ya mere, ọ dị mkpa iji nyochaa njedebe nke ụlọ ahụ nke ọma ma hụ ma egwuregwu a họọrọ nwere ike ịmegharị nke ọma na gburugburu ebe obibi.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Nye m oge ntụrụndụ » General » Egwuregwu bọọdụ kacha mma mgbe ọ bụla